सन्दीपको बलमा मुम्बईका सूर्यकुमार आउट - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
सन्दीपको बलमा मुम्बईका सूर्यकुमार आउट
Published On : ६ जेष्ठ २०७५, आईतवार १९:१२
इन्डियन प्रिमियर लिग अन्तरगत मुम्बई इन्डियन्सविरुद्धको खेलमा सन्दीप लामिछाने सुरुमै बलिङमा आएका छन् । पहिले ब्याटिङ गर्दै दिल्लीले १७४ रन बनाएपछि ब्याटिङमा आएको मुम्बईविरुद्ध सन्दीपले बलिङको अवसर पाएका हुन् ।
सन्दीपले मुम्बईका ओपनर सूर्यकुमार यादवलाई ४ बलमा १२ रन बनाएको अवस्थामा पेभेलियन पठाएका छन् । पहिलो र दोस्रो बलमा बाउन्ड्री गएपछि चौथो बलमा सन्दीपले सूर्यकुमारलाई आउट गरेका हुन् ।
पहिलो ओभरको चौथो बलमा सन्दीपले मुम्बईका ओपनर सूर्यकुमारलाई विजय शंकरमार्फत क्याच आउट गराएका हुन् । जित्नै पर्ने खेलमा अहिले मुम्बई पहिलो ओभर ब्याटिङ गर्दै १ विकेटको क्षतिमा १४ रन बनाएको छ ।
यसअघि सन्दीपले आईपीएलको डेब्यु खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरका पार्थिव पटेललाई आउट गरेका थिए । त्यसपछि उनले चेन्नईविरुद्धको खेलमा पनि उनले सुरेश रैनालाई पेभेलियन पठाएका थिए । सन्दीप त्यसक्रममा सबैभन्दा किफायती बलर पनि बनेका थिए ।
सन्दीपले मुम्बईविरुद्ध सुरुकै ओभर बलिङका क्रममा ९ रन खर्चिएर महत्वपूर्ण एक विकेट पनि लिन सफल भएका छन् ।